अक्टोबर 3, 2019
एनिरसिटेम र Nootropic
धेरै व्यक्ति घर र काम दुबैमा आफ्नो प्रदर्शन सुधार गर्न उपायहरू खोज्दैछन्। मस्तिष्क शरीरमा एक महत्वपूर्ण अ of्ग हो, र तपाईं सही रूपमा कार्य गर्नको लागि, तपाईंको मानसिक स्वास्थ्यको हर समय ध्यान राख्नु पर्छ। धेरै वर्षदेखि मानिसहरूले नौंट्रोपिक्स प्रयोग गर्दैछन् उनीहरूको ब्रेनपावर, मेमोरी, मानसिक सतर्कता, संज्ञानात्मक कौशल, र एकाग्रता बढाउन। एनिरासेटम पाउडर (72432२10२1-१०-१) आज बजारमा शक्तिशाली नूट्रोपिक पूरक मध्ये एक हो, जुन एकाग्रता बढाउन, चिन्ता कम गर्ने र समग्र मस्तिष्कको स्वास्थ्यमा सुधार गर्न आवश्यक साबित भएको छ।
Nootropics, सामान्यतया स्मार्ट ड्रग्स को रूपमा परिचित, एक बढ्दो औषधि उद्योग हो, र केहि औषधि अझै विकसित भैरहेको छ। Aniracetam पाउडर खरीद रेसेटम नूट्रोपिक परिवारसँग सम्बन्धित छ, र यस समूहमा लागूपदार्थको मेमोरी र संज्ञानात्मक कार्यहरु लाई बढावा दिन धेरै महत्वपूर्ण साबित भएको छ।
यो nootropic पाउडर अनलाइन वा नजिकैको भौतिक फार्मेसीमा उपलब्ध छ। यद्यपि यो सल्लाह दिइन्छ कि जहिले तपाईं एनिरासिटाम जस्ता स्मार्ट ड्रगहरू लिन थाल्नु अघि जहिले पनि मेडिकल जाँचको लागि जानुहोस्। कुनै पनि नूट्रोपिक्सलाई ओभरडोज गर्ने वा दुरुपयोग गर्दा गम्भीर साइड इफेक्टहरू हुन सक्छ जुन रिभर्स गर्न महँगो पर्दछ।
यद्यपि, मा nootropics रेष्टम परिवार सही प्रयोग भएको बेलामा न्यूनतम वा शून्य साइड इफेक्टहरू भएको भनेर चिनिन्छ। Aniracetam खुराक एक राम्रो चिकित्सा परिणाम द्वारा एक पेशेवर पेशेवर द्वारा सेट गर्नुपर्छ। Nootropics जस्तै aniracetam वा अरू कुनै पनि एक्लै लिन सकिन्छ वा अधिक औषधिको लागि अधिक औषधीको साथ स्ट्याक गर्न सकिन्छ। केही कम्पनीहरु र अनुसन्धानकर्ताहरु अझै नयाँ nootropic सप्लीमेन्टहरु र अन्य क्षेत्रहरु लाई लागू गर्न को लागी चिकित्सा अध्ययन गरिरहेका छन् जहाँ औषधि उपयोगी हुन सक्छ। तपाईले के प्राप्त गर्नु पर्छ त्यसमा निर्भर गर्दै, तपाइँको डाक्टरले तपाइँको लागि सबै भन्दा राम्रो nootropic पूरक लेख्नेछ
एनिरसिटेम र रेष्टम
एनिरसिटेम पत्ता लगाइएको पहिलो नूट्रोपिक्स बीच हो, र यो स्मार्ट ड्रग्सको रेष्टम परिवारसँग सम्बन्धित छ। १ no s० को शुरुमा पिरासिटाम भनेर चिनिने पहिलो नूट्रोपिक पाउडरको विकास पछि, चिकित्सा अनुसन्धानकर्ताहरूले यसको प्रभावहरूमा अध्ययन जारी राखे जसले पाइरासेटम रासायनिक संरचनामा परिवर्तन ल्यायो।
रासायनिक संरचना piracetam मा परिवर्तन Nootropic aniracetam को निर्माण को परिणाम। १ 1970 .० मा, बेल्जियमको फार्मास्युटिकल कम्पनी होफमान-ला रोचेले नोटोप्रिक एनिरासिटाम सिर्जना गरे जुन मस्तिष्कको प्रदर्शन बृद्धि गर्नका साथै संज्ञानात्मक मुद्दाहरूको उपचारमा सहयोग पुर्‍याउन गरिएको थियो।
अर्कोतर्फ, रेष्टम कृत्रिम पदार्थहरूको एक वर्ग हो जुन मुख्य रूपमा तपाईंको दिमागले संज्ञानात्मक उत्कृष्टता र सतर्कता कायम राख्न आवश्यक पोषक तत्व र रसायनिक आपूर्ति गरेर तपाईंको मस्तिष्कको स्वास्थ्य बृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ। रेसेटम परिवारमा केही नूट्रोपिक सप्लीमेन्टहरूमा एनिरासिटाम, पाइरासिटाम, Phenylpiracetam, र ओक्सिरासिटेम। सबै रेसट्यामहरू लगभग समान तरिकाले कार्य गर्दछन् र सामर्थ्य हुन्छन् जब यसले समग्र मस्तिष्कको स्वास्थ्यलाई बढाउँदै लैजान्छ।
यद्यपि यस परिवारका केहि स्मार्ट ड्रग्ससँग अरुलाई केहि फाइदा हुन सक्छ र ती छिटो र अधिकतम लाभका लागि पनि सँगै प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईको खुराक चक्रको अन्त्य सम्ममा के प्राप्त गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दै डोज एक रेसटम औषधिबाट अर्कोमा फरक हुन्छ। Aniracetam र रेसेटम बीचको सम्बन्धको बारेमा अधिक जानकारीको लागि आफ्नो डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्।
कसरी रेष्टमले काम गर्दछ?
सामान्यतया, रेसट्याम्स दुबै एसिटाइलकोलीन र ग्लूटामेट रिसेप्टर्स सक्रिय गर्दछन् जुन शरीरमा महत्त्वपूर्ण तत्वहरू हुन्, विशेष गरी अनुभूति बढाउन र तपाईंको शरीरका अंगहरूको समग्र शारीरिक गतिविधिहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन। ग्लूटामेट तपाईको शरीरमा प्रबल न्यूरोट्रान्समिटर हो, प्राय: दिमाग र केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा। यसले मस्तिष्कको कार्यलाई बढावा दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, जसले न्युरोल सर्किट मार्फत प्रसारित न्यूरोलजिक सन्देश निम्त्याउँछ। अर्कोतर्फ, ग्लूटामेटले गामा-एमिनोब्यूट्रिक एसिड (जीएबीए) पदार्थको मेटाबोलिज्ममा पनि मद्दत गर्दछ जुन प्रणालीमा ब्रेकको रूपमा काम गर्दछ, जसले न्युरो संचारको सम्भावनालाई कमजोर गर्दछ।
Acetylcholine एक न्यूरो ट्रान्समिटर हो जुन अनुभूतिलाई नियन्त्रण गर्ने इन्ट्राबॉडी संचारलाई बढाउनको लागि आवश्यक छ, र मांसपेशि दक्षता अधिक सम्झनाहरू र सिकाइको क्षेत्रमा। यो प्यारासिम्पेथेटिक स्नायु प्रणालीमा एक महत्वपूर्ण खेलाडी हो जसले मानव मस्तिष्कलाई तनावको माध्यमबाट चक्र र प्रक्रियामा मद्दत गर्दछ। बिभिन्न अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि प्रदर्शन र acetylcholine र इष्टतम ग्लूटामेट स्तरको विनियमले दिमाग र स्नायु प्रणाली दुबै दुबै काम गर्ने तरीका बढाउन मद्दत गर्दछ।
Aniracetam के हो?
Aniracetam पाउडर (72432२10२-१०-१) एक नूट्रोपिक पूरक हो जसले मूड, फोकस, र एकाग्रता बढाउनको साथसाथै तपाईंको शरीरमा केही न्यूरोट्रान्समिटरको रिलीजको लागि मद्दत गर्दछ। यो nootropic पाउडर निकट सम्बन्धित छ Nootropics को पहिलो कक्षा को लागी पत्ता लगाउन को लागी।
धेरै वर्षदेखि, aniracetam मा प्रभावकारी साबित भएको छ संज्ञानात्मक प्रकार्य बढाउँदै, मेमोरी विकास, र कहिलेकाँही मस्तिष्कको बिरामीलाई सुधार गर्न मद्दत गर्दछ, विशेष गरी वयस्कहरूमा। एक Nootropic एजेंट को रूप मा, aniracetam pyrrolidine परिवार को सम्बन्धित छ, र यो एक परीक्षण र प्रमाणित कम्पाउन्ड छ कि मानसिक प्रदर्शन बृद्धि गर्न र तनाव र चिन्ता कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
अनिरासिटाम एक द्रुत-अभिनय औषधि हो, जसको मतलब हो कि तपाईले यसको खुराक एक बहुत कम समय भित्र आफ्नो खुराक लिने पछि अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ र एक देखि तीन घण्टा भित्र हटाइने छ। यस aniracetam nootropics को बारे मा सबै भन्दा उत्साहजनक अंश यो एक उत्तेजक जस्तै प्रभाव समावेश गर्दछ, जो अन्य उत्तेजक प्रभावहरू जस्तै क्याफिन भन्दा धेरै फरक छ। Nootropics aniracetam अनुभूति एक फ्याट-घुलनशील औषधि हो, यसको मतलब तपाईंले यसलाई उचित शोषणको लागि आफ्नो खानाको साथ लिनु पर्छ।
राम्रो परिणामको लागि, एनिरासेटमलाई अन्य Nootropic पूरकहरूसँग स्ट्याक गर्न सकिन्छ, तर यो स्वतन्त्र रूपमा लिईए पनि यो एक शक्तिशाली औषधि साबित भएको छ। तपाईं यसलाई piracetam, rattam को साथ अन्य पूरकहरूमा स्ट्याक गर्न सक्नुहुनेछ।
Aniracetam के को लागी प्रयोग गरीन्छ? Aniracetam लाभ, प्रभाव
एनिरासिटाम मुख्य रूपमा व्यक्तिहरुद्वारा प्रयोग गरिएको हुन्छ जुन उनीहरूको मानसिक प्रदर्शन र सतर्कता बढाउने लक्ष्य राख्दछ, र धेरै व्यक्ति यसलाई सामान्यको रूपमा प्रयोग गर्छन्। nootropic एजेन्ट। यद्यपि युरोप देशहरूमा यो स्मार्ट औषधि केन्द्रीय स्नायु प्रणाली रोगहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ तर नुसारको आधारमा मात्र। यसको मतलब युरोपियन राज्यहरूमा तपाईलाई डाक्टरको सल्लाह बिना ड्रग किन्नु गाह्रो छ, विशेष गरी जब यसलाई बिभिन्न मानसिक अवस्थाको उपचार गर्न लिईन्छ।
जे होस् खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) ले एनिरासिटामलाई औषधीको रूपमा अनुमोदन गर्न सकेको छैन, जसको अर्थ हो, यसलाई बेच्न वा यो आहार पूरकको रूपमा वा कुनै रोगको लागि एक औषधिको रूपमा खरीद गर्न गैरकानुनी होईन। यद्यपि चिकित्सा अध्ययनहरूले देखाए कि वयस्कहरू बीच डिप्रेसन लक्षणहरू सम्बोधन गर्न यो नूट्रोपिक पाउडर आवश्यक हुन सक्छ। अपुष्ट रिपोर्टहरू, स an्केत गर्दछ कि यदि aniracetam संयुक्त राज्य अमेरिका मा कानुनी छैन, केहि व्यक्ति अझै पनि अनलाइन गर्न आदेश मा सक्षम छन् र aniracetam सुविधाहरूको आनन्द लिन।
एनिरसेटम नूट्रोपिक गुणस्तर नतिजा र लाभहरू प्रदान गर्दछ जब सही लिईन्छ र डाक्टरको निर्देशन अनुसार। धेरै वर्षदेखि, यो औषधि सिर्जना भएदेखि, यसले लाखौं मानिसहरूलाई मस्तिष्कको स्वास्थ्य बढाउनका साथै उनीहरूको जीवनशैलीलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गरेको छ। बिभिन्न मेडिकल अध्ययनहरूले यो प्रमाणित गर्‍यो कि यस नूट्रोपिक पाउडरले तपाईंको शरीरमा निम्न तरिकाले सकारात्मक प्रभाव पार्दछ;
अनुभूति सुधार गर्दछ
धेरै व्यक्ति aniracetam लिनुको एक प्राथमिक कारण यो मस्तिष्कलाई प्रदान गर्ने फाइदाहरूको कारण हो। चिकित्सा अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि प्रति दिन १1500००mg aniracetam खुराक लिनाले तपाईको संज्ञानात्मक कार्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव दिन सक्छ २ 2400००mg piracetam खुराक को बारे मा आठ दिन को लागी दिन को लागी भन्दा। यसको मतलब एनिरासिटाम शक्तिशाली छ नोट्रोपिक पूरक पाइरासिटामको तुलनामा जहाँ औषधि सारिएको थियो।
भावनात्मक स्थिरता प्रदान गर्दछ
तपाईंको समग्र मानसिक स्वास्थ्य र तपाईंको दैनिक जीवनमा भावनाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तसर्थ, तपाईं सबै समयमा एक स्वस्थ भावना सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ। शुभ समाचार यो हो कि नूट्रोपिक्स एनिरासिटाम खुराकले तपाईंलाई भावनात्मक सन्तुलन प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
चिकित्सा अध्ययनका अनुसार एनिरासिटाम र थेरापीको संयोजनले भावनात्मक स्थिरतामा सकारात्मक प्रभाव देखायो। जे होस् aniracetam ले एक्लो लिनु गुणवत्ता गुणात्मक लाभ प्रदान गर्दछ, cholinesterase एजेन्ट संग यो stacking मनोवैज्ञानिक स्थिरता प्रभाव बढाउँछ।
बुढेसकालको प्रक्रिया कहिलेकाँही बिभिन्न दिशा निर्देशन लिन सक्छ विशेष गरी तपाईको स्वस्थता, स्वास्थ्य र मेमोरीमा। जब तपाईंको मस्तिष्क उमेर, सम्झना र नयाँ सम्झनाहरु गठन जब तपाईं विशिष्ट स्मृति-सम्बन्धित अवस्था बाट पीडित हुनुहुन्छ अझ कठिन हुन सक्छ। यद्यपि, दुर्बल पथलाई रोक्नु जुन बुढेसकालको प्रक्रियामा देखा पर्दछ, तपाइँको स्मृति तिखार्ने र वयस्कहरूको बीचमा स्मृति-सम्बन्धी बिमारीहरूको विकास रोक्न उत्तम तरिका हुन सक्छ। बिभिन्न मेडिकल अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि 50०mg प्रति किलोग्राम तपाईको शरीरको तौलमा मुटुको दिमागमा कमजोरीको रूपमा स्मृति गिरावटमा उल्टो हुन सक्छ। यसैले, सुझाव दिदै कि Aniracetam पाउडर (72432-10-1) एक उत्कृष्ट मेमोरी-बूस्टिंग पूरक हो।
तपाइँको फोकस बृद्धि गर्दछ
एकाग्रता र ध्यान सिक्न, मेमोरी, उत्पादकता, र समग्र संज्ञानात्मक कार्यहरु मा एक अत्यावश्यक भूमिका खेल्छ। न्युरोट्रान्समिटर एसिटिचोलिन र डोपामाइन पनि एकाग्रता र फोकस बृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका छ। अध्ययनहरूले पत्ता लगायो कि aniracetam ले तपाईंको समग्र फोकसलाई Acetylcholine र डोपामाइन न्यूरोट्रान्समिटरहरू मिलाएर सुधार गर्दछ।
तपाईंको मुडलाई बढावा दिन सक्छ
जीवनमा, कहिलेकाँही तपाईंसँग कम क्षणहरू हुन्छन् जहाँ तपाईं आफ्नो मुड बृद्धि गर्न चाहनुहुन्छ र प्राकृतिक तपाईंलाई फिर्ता लिन चाहानुहुन्छ। त्यहाँ जीवन घटनाहरू छन् जुन नकारात्मक रूपमा तपाईंको मुडलाई असर गर्दछ र तपाईंलाई निराश महसुस गराउँदछ, र कहिलेकाँही तपाईं आत्माहरूमा हुनुहुनेछ। जीवनमा विभिन्न कारकहरूले तपाइँको मुडलाई प्रभाव पार्छन्, कि त सकारात्मक वा नकारात्मक रूपमा। जे होस्, सहि लिदै Nootropic पाउडर खुराकले तपाईंलाई तपाईंको मुड बढाउन मद्दत गर्दछ।
सेरोटोनिन र डोपामाइन न्यूरोट्रान्समिटरहरू तपाईंको समग्र मुडलाई बढावा दिन जिम्मेवार छन् किनकि यसले एक उत्तेजक संवेदना सिर्जना गर्दछ। जसरी यसले फोकस सुधार गर्दछ, मेडिकल टेस्ट र परीक्षणले एनिरासिटाम पाउडर देखाएको छ, सेरोटोनिन र डोपामाइन लेभल बढाउँदछ, जसले न्युरोट्रान्समिटरको स्तरलाई सन्तुलन गर्छ जसको फलस्वरूप मूड अपलिफ्टि। हुन्छ।
तनाव र चिन्ता हटाउन सहयोग गर्दछ
किन धेरै मानिसहरूले aniracetam चिन्ता लिन मन पराउनुको कारण यसको तनाव कम गर्ने क्षमताको कारण हो। चिन्ता र उदासीनता मानिसहरूले जीवनमा सामना गर्नुपर्ने धेरै चुनौतीहरू मध्ये एक हुन्। जबकि, शारीरिक तनाव र भावना चाँडै मिश्रित गर्न सक्छन्। राम्रो जीवनको लागि तपाईंलाई तनाव कम गर्न सहयोगका लागि सही नूट्रोपिक प्राप्त गर्नु आवश्यक छ।
अध्ययनहरूले देखाए कि aniracetam को कॉम्प्याक्ट र मानसिक तनाव र चिन्ता कम गर्ने उत्कृष्ट क्षमता छ। यो नूट्रोपिक पाउडर एसिटिचोलिन, सेरोटोनिन, र डोपामाइन न्यूरोट्रान्समिटरको रिलीज गर्न उत्तेजित गर्दछ जुन तपाईंको मुडलाई बढावा दिन आवश्यक छ, त्यसैले तनाव हटाउँछ।
Aniracetam Vs Piracetam: के तिनीहरू समान छन्?
यद्यपि एनिरसेटम पाउडर (72432२10२1-१०-१) र पाइरासिटाम सानो नूट्रोपिक सबक्लाससँग सम्बन्धित छ जसलाई रेसट्याम भनेर चिनिन्छ, दुई औषधि समान छैन। दुबै Nootropics शक्तिशाली औषधि हो जब यो आउँछ बढाउने मानसिक सतर्कताका साथै विभिन्न संज्ञानात्मक प्रक्रियाहरूलाई बढावा दिँदै, यद्यपि प्रयोगकर्ताको शरीर सहनशीलतामा निर्भर गर्दछ। सबैले भने, केही पक्षहरूले piracetam लाई aniracetam बाट फरक पार्छ।
धेरै व्यक्तिलाई ज्ञात सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भिन्नता भनेको एनिरासिटाम piracetam को तुलनामा एक शक्तिशाली nootropic औषधि मानिन्छ। यो विश्वास गरिन्छ कि aniracetam piracetam भन्दा दस गुणा मजबूत छ। एनिरासिटामले एनिसियोलिटिक गुणहरू पनि देखायो जुन तनाव र चिन्ता कम गर्नमा मद्दत गर्दछ।
केही अध्ययनहरूले यो पनि हाइलाइट गरेको छ कि aniracetam एक संवेदी उत्तेजक जस्तै संचालन गर्न सक्छन् र स्वाद, रंग, र गन्ध रूपमा विभिन्न संवेदी इनपुट अनुमति दिन्छ साथै तपाईंलाई उच्च तीव्रतामा तिनीहरूलाई अनुभव मद्दत गर्दछ।
रासायनिक रूपमा, पाइरासिटाम पानीमा घुलनशील हुन्छ जबकि एनिरासिटाम फ्याट-घुलनशील हुन्छ। यसको मतलब, एनिरासेटम पाउडरले रगत मस्तिष्क अवरोधलाई पिरासिटाम भन्दा सजिलै पार गर्न सक्दछ, र यो यसको द्रुत-अभिनय सम्पत्ती पछाडि हो। दुई औषधीको रासायनिक संरचना बीचको भिन्नता एनिरासिटाम piracetam भन्दा बढी शक्तिशाली को रूप मा मानिन्छ कारण हुन सक्छ।
यसले Aniracetam लाई किक गर्न कति समय लाग्छ?
एक पटक तपाईं आफ्नो खुराक लिनुभयो भने एनिरासिटाम नूट्रोपिक्स तपाईंको रक्तप्रवाहमा छिट्टै जान्छ। डा। क्रेग लीले गरेको मेडिकल अध्ययन अनुसार, रक्तप्रवाहको चोख एकाग्रतामा लाग्न औषधि लगभग चालीस मिनेट लाग्छ भनेर देखायो। जे होस्, यो आकृति माथि वा तल जान सक्दछ तपाईं कसरी आफ्नो खुराक लिनुहुन्छ, या त भोजनको लगत्तै, यसलाई लिनुहोस् वा खाना बिना।
अर्कोतर्फ, तपाईंको शरीरको वजन वा उचाइ वा अन्य औषधिहरू जुन तपाईंले लिइरहनुभएको हुन सक्छ प्रभाव पनि anaicetam ले लिने समयलाई असर गर्न सक्दछ तपाईंले प्रभावहरू शुरू गर्नु अघि। प्रभाव पनि छोटो समयको लागि रहनेछ किनभने aniracetam आधा जीवन रेसेट परिवारमा अन्य nootropic ड्रग्सको तुलनामा अलि छोटो छ। Aniracetam पाउडर आधा जीवन को बारे मा 1 देखि 2.5 घण्टा छ। तपाईको डाक्टरले सहि खुराक अन्तरालहरू सेट गर्दछ तपाईले सुनिश्चित गर्नुभयो कि अधिकतममा एनिरासेटम फाइदाहरुको मजा लिनुहुन्छ।
म कसरी Aniracetam लिन सक्छ?
कसरी aniracetam लिन को शर्त मा - nootropic पाउडर खुराक एक व्यक्ति देखि अर्को मान्छे फरक हुन्छ, व्यक्ति चक्र को अन्त द्वारा प्राप्त गर्न को लागी के इच्छा मा निर्भर गर्दछ। जे होस्, सिफारिश गरिएको मौखिक aniracetam खुराक लगभग 750mg हुनु पर्छ।
जसले नियमित वा दैनिक आधारमा यो औषधि लिन्छन् तिनीहरूको लागि दिनको एक देखि तीन खुराक लिन सल्लाह दिइन्छ। प्रति दिन १००० देखि १1000००mgs भनेको उनीहरूको लागि एक सही खुराक मानिन्छ जो आफ्नो संज्ञानात्मक कार्यहरू बढाउन चाहान्छन्। व्यक्ति जो आफ्नो शिक्षा र मेमोरी वृद्धि गर्न चाहानुहुन्छ, खुराक तिनीहरूको शरीरको वजन द्वारा निर्धारण गरिन्छ।
उदाहरण को लागी, खुराक तपाईको वजन को 10 कि 100mg हुनु पर्छ। तपाइँको अवस्थाको लागि सही aniracetam खुराक सेट गर्न मद्दत गर्न तपाइँको डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
जस्तो कि कुनै अन्य लिँदा नोट्रोपिक पूरक, यो सँधै राम्रो विचार हो सुरुमा कम खुराकका साथ सुरू गर्न, जुन तपाईं चाहानु हुने प्रभावहरू अनुभव नगरेसम्म बिस्तारै मिलाउन सकिन्छ. Aniracetam पाउडर को लागी तपाइँको शरीर मा छोटो अवधि प्रभावकारिता छैन। तसर्थ, सानो र लगातार खुराक एक पटक एकल ठूलो खुराक लिन भन्दा अधिक प्रभावकारी हुन सक्छ। याद गर्नुहोस्, एनिरासेटम फ्याटी एसिडको साथ लिनु पर्छ तपाईको रक्तप्रवाहमा सजीलो सोस्न सहयोग पुर्‍याउन।
एनिरासेटमको साइड इफेक्टहरू के हुन्?
त्यहाँ aniracetam को सुरक्षा को बारे मा कम जानकारी छ जब एक लामो समय को लागी लिएको। क्लिनिकल अध्ययनहरूले सम्पूर्ण वर्षको लागि लागू गरेको औषधिको प्रभावको परीक्षण गर्‍यो भने कि औषधि सुरक्षित छ र प्रयोगकर्ताहरूले थोरै र सहन गर्न नसकिने एनिरासिटाम साइड इफेक्टहरू जस्तै सिरदर्द, अनिद्रा, मतली, र चिन्ताको अनुभव गर्न सक्दछन्। जे होस्, एनिरसेटम खतराहरू अधिकत: उच्च खुराक, दुरुपयोग, र कसरी तपाईंको शरीरले ड्रग डोजलाई प्रतिक्रिया गर्दछ सम्बन्धित छ। अर्कोतर्फ, aniracetam स्ट्याक्स इच्छित परिणामहरू प्रवर्धन गर्न परिचित छन् तर यसले तपाईंलाई साइड इफेक्टको उच्च जोखिमहरू पनि उजागर गर्न सक्दछ।
सुरक्षित पक्षमा हुन, सँधै आफ्नो डाक्टरको सहि खुराक लिनुहोस् र यदि तपाईले अरू कुनै औषधि लिईरहनुभएको छ भने पनि औषधीलाई सूचित गर्नुहोस्। केहि औषधिहरू, जब ती तपाइँको शरीर प्रणालीमा aniracetam सँग मिल्दछन्, गम्भीर साइड इफेक्टको परिणाम दिन सक्छ। औषधि परीक्षण अघि, समयमा, र पनी aniracetam पाउडर खुराक चक्र पछि औषधीको प्रगति निगरानीको साथ साथै कुनै गम्भीर साइड इफेक्टहरू पत्ता लगाउन मद्दतको लागि पनि आवश्यक छ। शुभ समाचार यो हो कि एनिरासिटाम एक्लैले तपाईंलाई कम्तिमा पनि गम्भीर दुष्प्रभावहरूमा पर्न सक्छ, र यदि यो हुन्छ भने, तपाईंको डाक्टरले सजिलैसँग तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ।
एनिरसेटम रेडडिट समीक्षालाई हेर्दै, धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यस नूट्रोपिक पाउडरसँग उनीहरूको सन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् किनकि यसले गुणनम नतिजालाई न्यूनतम साइड इफेक्टको साथ डेलिभर गर्दछ। यद्यपि मानव शरीर प्रणालीहरू धेरै फरक छन्; तपाईं पाउन सक्नुहुन्छ कि अन्य ratam nootropics तपाईं मा aniracetam भन्दा राम्रो काम गर्दछ र यसको विपरित हो।
के Aniracetam कानूनी हो र म कहाँ aniracetam पाउन सक्छ?
पहिले उल्लेख गरीएको छ, यस लेखमा, aniracetam यूरोपीय देशहरुमा चिकित्सा उपयोग को लागी अनुमोदित छ, र aniracetam nootropics डिपो सबै जहाँ तपाइँ सजीलै पाउन सक्नुहुन्छ भर मा छन् बिक्रीको लागि aniracetam पाउडर। युरोपमा, औषधि सजिलैसँग शारीरिक र अनलाइन स्टोरहरूमा उपलब्ध छ। यद्यपि तपाईले औषधि किन्नु भन्दा पहिले तपाईले डाक्टरको प्रिस्क्रिप्शन लिनु पर्छ। यसको विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिकामा, एफडीए अझै aniracetam खरीद स्वीकृत गर्न को लागी।
यद्यपि प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्महरूमा किन्न सक्छन् जस्तै एनिरासेटम अमेजन। तपाईंको देशका कानूनहरूले एनिरासेटमको प्रयोग, खरीद, वा आयातको बारेमा के भन्छ भनि पुष्टि गर्न जाँच गर्नुहोस्। एनिरसेटम इंडियाले एशियाली देशका साथै अन्य क्षेत्रहरूमा पनि उत्कृष्ट ध्यान पाइरहेको छ।
हामी सधैं हाम्रो ग्राहकलाई एनिरासिटाम आपूर्तिकर्ता कसरी सञ्चालन गर्छ भन्ने विश्वास गर्न उचित अनुसन्धान गर्न सल्लाह दिन्छौं। प्रतिष्ठा र अनुभवलाई प्राथमिकता दिँदै जब खोजी गर्दै उत्तम aniracetam पाउडर विक्रेता.
एनिरासिटाम पत्ता लगाउनको लागि पहिलो नूट्रोपिक पूरकको व्युत्पन्न हो, र यसले फोकस, सिक्ने क्षमता, मेमोरी र एकाग्रता बढाउनमा शक्तिशाली साबित भएको छ। अर्कोतर्फ, औषधिले बिभिन्न प्रभावहरू पनि राख्दछ जुन तपाईंको शरीरमा न्यूरोट्रान्समिटरको रिलीजलाई उत्तेजित गर्दछ, जसले तपाईंको मस्तिष्कको स्वास्थ्य वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
Aniracetam पाउडर समीक्षा देखाउँछ कि प्रयोगकर्ताहरु परिणाम बाट खुसी छन् औषधि उद्धार र एक धेरै छोटो समय भित्र। जे होस् औषधि piracetam रासायनिक संरचना को परिमार्जन को माध्यम बाट बनाईएको थियो, aniracetam भन्दा दस गुना शक्तिशाली हुन मानिन्छ piracetam.
उपचार अन्तर्गत मस्तिष्कको अवस्थाको आधारमा एनिरासिटाम पाउडर खुराक एक व्यक्तिबाट अर्कोमा फरक हुन्छ। तपाईको डाक्टर द्वारा सेट गरिएको खुराकमा टाँस्न सल्लाह दिइन्छ, र यदि तपाईले इच्छित प्रभावहरु अनुभव गर्नु हुन्न भने तपाईलाई जहिले पनि एडजेस्टलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई समायोजित गर्न। सामान्यतया, तपाई कम aniracetam खुराक को साथ शुरू गर्नु पर्छ, तब बिस्तारै यसलाई बढाउनुहोस् जबसम्म तपाईलाई चाहिने परिणामहरू प्रदान गर्न पर्याप्त खुराक प्राप्त हुँदैन। तपाईं पनि aniracetam स्ट्याक को लागी लाभ लिन सक्नुहुनेछ।
अन्तमा, aniracetam उच्च खुराक ले तपाईंलाई गम्भीर साइड इफेक्ट गर्न सक्छ; तसर्थ, जहिले पनि सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ एक डाक्टरको निर्देशन पालन गर्नुहुन्छ। तपाईको औषधिसँग परामर्श नगरी तपाईको खुराक घटाउने वा बढाउने काम नगर्नुहोस्। समान रूपमा, तपाईं कुनै aniracetam खतरों को अनुभव पनि तुरुन्त आफ्नो डाक्टर सूचित। यद्यपि, त्यहाँ केही सहन गर्न सकिने स-साना साइड इफेक्टहरू छन् जुन तपाईले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै टाउको दुख्ने, अनिद्रा, र मतली, यदि ती अपेक्षाहरू भन्दा लामो रहन्छन् भने सहयोगका लागि चिकित्सा पेशेवरसँग कुरा गर्छन्।
एल्स्टन, TW, पाण्डियन, ए, स्मिथ, जीडी, होली, एजे, गाओ, एन, र लुगो, जेएन (२०१ 2014)। एनिरासिटामले वयस्क C57BL / 6J चूहोंमा संज्ञानात्मक र मायालु व्यवहार बदल्दैन। PloS one, 9(8), e104443।
सकल, ए, इस्लाम, आर।, र ब्लूमक्विस्ट, जे। (२०१ 2017)। ग्लुटामेट रिसेप्टर-केसन च्यानल जम्मा: लामखुट्टे नियन्त्रणको लागी एक अज्ञात लक्ष्य। In ACS Symp सेर(भोलु। १२1264, pp। १११-१२))
रेनल्ड्स, सीडी, जेफरसन, टीएस, भोलकार्डेन, एम, पाण्डियन, ए, स्मिथ, जीडी, होली, एजे, र लुगो, जेएन (२०१ 2017)। C57BL / 6J चूहोंमा मौखिक aniracetam उपचार पूर्व अवस्थित संज्ञानात्मक डिसफंक्शन बिना सिकाई, मेमोरी, चिन्ता वा रूढीमा कुनै परिवर्तन प्रकट गर्दैन। F1000 अनुसन्धान, 6.
सनद, MH, Farag, AB, र सलामा, DH (२०१ 2017) रेडियोडाइनेसन, आणविक मोडलि and र ब्रेन इमेजिंगको लागि ट्रेसरको रूपमा एनिरासेटमको जैविक मूल्यांकन। विकिरण विज्ञान र अनुप्रयोगहरूको इजिप्टियन जर्नल (अनलाइन), 30(2), 131-143।
१.अनिरसेटम र नूट्रोपिक
२.अनिरसेटम र रेष्टम
Race.रेष्टमले कसरी काम गर्दछ?
An.अनिरासेटम के हो?
An.निरासिटाम केको लागि प्रयोग गरिएको छ? Aniracetam लाभ, प्रभाव
A.अनिरसेटम बनाम पाइरासेटम: के तिनीहरू उस्तै छन्?
An. Aniracetam लाई किक गर्न कति समय लाग्छ?
An. मैले कसरी एनिरासेटम लिनु पर्छ?
An। एनिरासेटमको साइड इफेक्ट के होला?
१०.Is एनिरासेटम कानूनी हो र म कहाँ aniracetam पाउन सक्छु?